Maamulka Ahlu Sunna oo ka jawaabay eedeynta loo soo jeediyay – STAR FM SOMALIA
Iyadoo habeen hore Magaalada Caabudwaaq ee Gobolka Galgaduud lagu dilay Allaha u naxariistee Mu’adinkii Masjid Jaamaca Magaalada Caabudwaaq, ayaa dilka Mu’adinkaasi qaar ka tirsan Culimada Magaalada waxa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe.
Ahlu Sunna oo ka jawaabaysa eedeyntaasi loo soo jeediyay, ayaa sheegtay warkaasi in uu yahay mid waxba kama jiraan ah, sidoo kalena Maamulka Ahlu Sunna Gobolada Dhexe aysan shaqo ku laheyn dilkaasi la sheegay in Mu’adinka loo geystay.
Afhayeen u hadlay Maamulka Gobolada Dhexe ee Ahlu Sunna oo lagu magacaabo Muxudiin Cali Jimcaale, ayaa ugu horeyn sheegay inay aad uga xun yihiin dilkaasi dhacay, waxaana uu intaasi ku daray in Ahlu Sunna aysan dilkaasi wax shaqo ah ku laheyn.
Wuxuu sheegay inay aad u cambaareynayaan cid waliba oo ka dambeysay dilka Mu’adinka Masjidka Jaamaca Magaalada Caabudwaaq.
Kadib aaskii shalay loo sameeyay Sheekh Farxaan Maxamed Jaamac ayaa culimadii ka qaybgashay waxa ay sheegeen inaysan garan karin sababta ka dambeysay dilka loo geystay Mu’adinka Masaajidka.
Sheekh Farxaan Maxamed Jaamac, kasokoow mu’adinka Masaajidka in uu ahaa wuxuu quudin jiray oo subax waliba raashin siin jiray Shinbiro badan oo Barxada dambe ee Masaajidka isugu imaan jiray subax waliba, sida ay sheegeen culimadii taqaanay Sheekha.
Ilaa hada si cad looma oga waxa uu salka ku haayo dilka loo geystay Sheekh Farxaan Maxamed Jaamac oo shalay lagu aasay Magaalada Caabudwaaq.